Makhaayadaha Shiinaha In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Makhaayadaha Shiinaha In Europe
Rasmi ah basbaaska leh oo xoog leh dhadhan cajiib ah, cuntada Chinese wanaagsan yahay mararka qaar adkaa inay u yimaadaan in Europe. Si kastaba ha ahaatee, waxaa war fiican ah in ay jiraan maqaayado Chinese weyn ee Europe - leedahay in aad ogaato meesha aad ka heli, iyo sidaad u tagi karto. Tan iyo markii inta badan iyaga ka mid ah waa in magaalooyinka Yurub ugu waaweyn ama caasimadaha, waxaa quman in yimaadaan tareen.
Iyadoo a network tareen dhakhso fiican oo heer sare in Europe faanaa, waxa suuragal ah si aad u hesho meel kasta oo arrin saacadood - oo wuxuu ku raaxaysan wadooyinka muuqaal dabiici ah oo ay jidka ku sidoo kale. Waayo, kuwa idinka mid ah oo jamasho qaar ka dhigtey raashinka daruuriga Asian, halkan waa makhaayadaha ugu wanaagsan Chinese in Europe, iyo sidaad u tagi karto tareen:
Badda Palace - Amsterdam, Netherlands
maqaayado intooda badan waxaa diiradda lagu siiyo wax macaamiisha weyn ay u dhadhamiyaan. Si kastaba ha ahaatee, Palace Badda ee Amsterdam ujeedadiisu tahay si ay kuu siiyaan ah waayo-aragnimo in ku lug yeelan doonaan ma aha oo kaliya ku hari dhadhan aad, laakiin sidoo kale in ay fududaato on indhaha. U dhisay sidii pagoda a, maqaayadan sabayn waa meel fiican u nastaan ​​qaar ka mid ah cuntada ugu fiican Chinese halkaas.
suxuunta Rice, bur saliid, rootida, duub guga - aad u magacaabi, dhammaantood waxay ku jiraan liiska oo ay u dhadhaminayaan sida saxda ah hadaad joogi laheyd Shiinaha. Taasi waxa la filayaa mid ka mid ah maqaayadaha ugu fiican Chinese in Europe. Haddii aad doonayso inaad hesho in ay Amsterdam tareen, aad awoodid qaadi tareenku ka Paris a, Berlin, iyo kuwa kale magaalooyinka Yurub.
Hamburg si Tareenadu Amsterdam
Hanover in Tareenadu Amsterdam
Luxembourg in Tareenadu Amsterdam
Dortmund inay Tareenadu Amsterdam
Friends Good iyo Makhaayadaha Shiinaha ee Europe - Berlin, Germany
In magaalo chock buuxa ee makhaayadaha Chinese, la sheegay in mid ka mid ah maqaayadaha ugu fiican Chinese in Europe heysta muhiimad gaar ah. Waxay ku taallaa Kantstrase, ee Berlin ee Chinatown, Saaxiibada wanaagsan yahay aasaaska ah faanaa menu ballaaran iyo cunto dhab ah fadilay by labada muhaajiriinta Chinese iyo dalxiisayaasha.
Waxaad tegi maayo khalad ah haddii aad soo booqato Friends Good marka ee Berlin. Si aad u u hesho in ay Berlin, aad tareen ka shiidaa magaalada wax weyn ka Europe qaadan karto oo waxaa jiri saacadood gudahood.
Dortmund inay Tareenadu Berlin
Dusseldorf in Tareenadu Berlin
Dresden in Tareenadu Berlin
Heidelberg in Tareenadu Berlin
Marka aan ka fekero Italy, waxaan sida caadiga ah ha ku xidhmaan cuntada Shiinaha. Haddii aad isku dareemaan, tahay in aad la yaabi doontaa in ay bartaan in Talyaanigu sameeyo bar jilicsan waayo, taqasusyo Chinese. Oo mid ka mid ah maqaayadaha ugu fiican cunto Chinese in Europe, Hangzhou, sida xaqiiqada ah waxay daliil u sheegay in.
Waxaa lagu daro qaar ka mid ah saameynta Talyaani, laakiin inta badan menu waa cunto Chinese dhab ah oo ay tahay in aad isku daydo haddii aad isku aragto in Rome. Safar Italy tareen si ay u sameeyaan dhici, ama ku Qaadataa in Tareenku Rome ka mid ka mid ah caasimadaha kale ee Yurub.
Cite Du Dragon dabcan wuxuu ka mid yahay Makhaayadaha Shiinaha ee ugu Fiican Yurub - Brussels, Belgium
makhaayad kale faanaa a gudaha fantastic oo design beerta garab suxuuntiisa cajiib ah, Tixraacaan Du Dragon ee Brussels waxaa la yiraahdaa kasbatay mid ka mid ah maqaayadaha ugu fiican Chinese in Europe. Iyadoo in ka badan 300 kuraasta iyo beer ah ornamental fiican, aad dareento doonaa sida aad ku socday galay riyo bariga habboon. saxan kasta waa ku yaab, laakiin waxaan kala soocidoonaa wadarta guud iyo khaaska guriga, Bekiin duck, sida laba wax oo waa in aad isku daydo haddii aad tahay booqashada Brussels tareen.
Bruges in Tareenadu Brussels
Maastricht in Tareenadu Brussels
Halle in Tareenadu Brussels
Ghent in Tareenadu Brussels
Shiinaha Jikada No. 27 - Vienna, Austriaa
In Chinatown ee Vienna, Shiinaha Jikada No. 27 waxaa inta badan lagu xusay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan. Haddii aad rabto in aad cunto basbaas, Meeshan waa. Waxay sidoo kale bixiyaan qaar ka mid ah suxuunta dheeraad ah oo aan caadi ahayn, sida salad carsaanyo, in kastoo aannu ku talinaynaa digaag xilkan Bao haddii aad rabto inuu ku soo shirtagi Classics ah. Waxaad si fudud u safri kartaa Vienna tareen laga saaray magaalooyin waaweyn oo Yurub ah ugu, sidaa darteed ma seegi fursad in.
Dortmund inay Tareenadu Vienna
Dresden in Tareenadu Vienna
Heidelberg in Tareenadu Vienna
Dusseldorf in Tareenadu Vienna
Ready muunad suxuunta fiican ee qaar ka mid ah maqaayadaha ugu fiican cunto Chinese in Europe? Jartaan tikidhka tareenka aad hore, iyo bood on tareen in aad qaado si aad u quudhin gastronomical weyn ee soo socota.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-chinese-restaurants-europe%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our, in link this waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml – gudaha aad leedahay xiriir la leenahay / en / laakiin waad bedeli kartaa in ay / fr / ama / de / ama / waxaa / iyo luuqado badan
#asianfood #BestChineseRestaurants #chinesefood europetravel talooyin tareenka tareen safarka safarka tareenka
Safarka tareenka, Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe